Seva အခွင့်အလမ်းများ - ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း
TOVP Grand ဖွင့်လှစ် COUNTDOWN
တရားဝင် TOVP Grand Opening သို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲစတင်ခဲ့သည်။ Lord Caitanya ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဗိမာန်တော်၊
DONATE NOW စာမျက်နှာသည်ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သူ့ကိုမဆိုကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းမဆိုဤသမိုင်းဝင်စီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်သူတို့၏နည်းလမ်းများနှင့်အညီနှလုံးသားမှပေးဆပ်ရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပိုမိုကြီးမားသည့်အလှူငွေများသည်အပေါင်ပစ္စည်းအပေါ်တွင်သာမူတည်ပြီးပိုမိုကြီးမားသောကတိက ၀ တ်ပြုပြီးအချိန်နှင့်အမျှပေးဆပ်နိုင်သည်။ အပေါင်ငွေပေးချေမှုကိုလည်းဒီစာမျက်နှာကနေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ငွေပမာဏကိုသင်၏ပူဇော်သက္ကာကိုအများဆုံးတန်ဖိုးထားသည်။
ဂုဏ်ပြုပါ ၁၂၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ 2021 ခုနှစ်တွင် SRILA PRABHUPADA ၏
TOVP တွင် PRABHUPADA MURTI အသစ်ကို Grand Installation ။
အောက်တိုဘာ, 2021။ ယနေ့ Abhisheka ကိုထောက်ပံ့သူ။
“ ငါသွန်သင်ပေးပြီ၊ ဆက်သွားပါလိမ့်မယ် အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်းတစ်သောင်းအထိဆက်ရှိနေ ဦး မှာပါ။
Srila Prabhupada, ဇွန်လ 21, 1976
ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းသို့သင်မည်ကဲ့သို့လှူဒါန်းနိုင်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုချဲ့ထွင်ရန်နှိပ်ပါ
PRABHUPADA SEVA 125 ဒင်္ဂါးပြား (ရှားပါးအိန္ဒိယအစိုးရ။ ငွေစက္ကူ) အသစ်။ အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသောအခွင့်အရေး
PRABHUPADA SEVA ၁၂၅
ဒင်္ဂါးပြား ၁၀၈ သာရနိုင်သည်။
ဤကန့်သတ်အချိန် Prabhupada ၁၂၅ နှစ်မြောက်အသွင်အပြင်နှစ်ပတ်လည်အိန္ဒိယအစိုးရအားပံ့ပိုးပါ။ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်မင်းရဲ့မိသားစုအတွက်အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်စေမယ့်ငွေဒင်္ဂါးပြား!
PANKAJANGHRI DAS SEVA - အသစ်!
Sriman Pankajanghri ၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်လိုချင်မှုများကိုရိုသေလေးစားစွာဖြင့် Nrsimha Wing ဆီသို့လှူဒါန်းခြင်းသို့မဟုတ် Nrsimha အုတ်ကိုစပွန်ဆာပေးခြင်းဖြင့် TOVP ရှိ Lord Nrsimha ၏အိမ်အသစ်ကိုပြီးမြောက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်ကိုရိုသေလေးစားပါ။
မှတ်ချက်။ ။ အထွေထွေလှူဒါန်းမှုကိုပြုလုပ်သည့်အခါ TOVP ရှိ Lord Nrsimhadeva ဘုရားကျောင်းကိုဆောက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
SRILA PRABHUPADA GRAND MURTI INSTALLATION အခမ်းအနား
၂၀၂၁ သည်သူ၏မြင့်မြတ်သောကျေးဇူးတော်အနှစ် (၁၂၅) ပြည့်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့သည်။ Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ISKCON ကိုတည်ထောင်သူ၊ TOVP သည် Master ပန်းပုဆရာ Locan das မှဖန်တီးထားသော Srila Prabhupada ၏ပုံစံအရွယ်အစားရှိအထူးပုံစံဒီဇိုင်းများကိုတပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် Samstapak Acharya (နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ အတွက် Acharya) ၏ဤမင်္ဂလာရှိသောအသွင်အပြင်နှစ်ကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည် ( ACBSP) ၂၀၂၁၊ အောက်တိုဘာလတွင်မင်္ဂလာရှိသော Damodar လတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြား Prabhupada murti များကဲ့သို့ပင်ဤ murti သည်“ ဝတ်ပြုရေးအတွက်ပြုလုပ်သောအရာ” ၌တည်ရှိပြီး၊ “ Mayapur သည်ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ရာနေရာဖြစ်သည်” ဟုဖော်ပြသည်။ သူသည်နှစ်ပေါင်းရာချီကြာပြီးနောက်သူ၏ Grand Vyasasana တွင်ဘုန်းကြီးစွာထိုင်ပြီးသူ၏ Lordships ကိုထာဝရကိုးကွယ်ပြီးသူတို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုကြိုဆိုသည်။
Srila Prabhupada ကို TOVP သို့ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာအနှံ့ပေါင်းစည်းထားသည့်ဂုရု Dakshina လှုပ်ရှားမှုအတွက်ယနေ့လှူဒါန်းပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ abhishekas ငါးမျိုးအနက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကမကထပြုခြင်းအားဖြင့် TOVP ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း။
Install ABHISHEKA စပွန်ဆာ
ISKCON ရှိယောက်ျား၊ မိန်းမနှင့်ကလေးတိုင်း Srila Prabhupada ကို $25 စပွန်ဆာဖြင့်ရေချိုးနိုင်သည်။ ကြေးနီ၊ ငွေ၊ ရွှေသို့မဟုတ်ပလက်တီနမ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရေချိုးပြားတစ်မျိုးကိုစပွန်ဆာပေးသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါစပွန်ဆာပေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုဖတ်ပြီး abhisheka ကိုစပွန်ဆာပေးပါ။
၁။ ရေရေချိုးခြင်း - $25 / ₹ 1,600 / £ 20 (မိသားစုဝင်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ထောက်ပံ့သူ) ။
၂။ ကြေးနီဒင်္ဂါးပြား - $300 / ₹ 21,000 / £ 250
၃။ ငွေဒင်္ဂါးပြား - $500 / ₹ 35,000 / £ 400
4. ရွှေဒင်္ဂါးပြား - $1,000 / ₹ 71,000 / £ 800
5. ပလက်တီနမ်ဒင်္ဂါးပြား - $1,600 / ₹ 1 သိန်း / £ 1,300
6. SAMSTAPAK ACHARYA SEVA - $10,000 / ₹ ၇ သိန်း / £ ၈၀၀၀
၁၀၈ ၅၀ ရှည်လျားသောလှေကားထစ်များသည်မြေညီထပ်မှ TOVP ၏ဝင်ပေါက်သို့ ဦး တည်သည်။ ယခုသင်သည်ခြေလှမ်းတိုင်းအတွက်စပွန်ဆာတစ် ဦး အနေဖြင့်ရောက်ရှိပြီးလာရောက်သူအားလုံး၏ကြာပန်းခြေနပ်များကိုထမ်းဆောင်နိုင်သည်။
108 လက်နက်ချအဆင့်ဆင့်ကိုလှူဒါန်းမှုနှုန်း 10 လှူဒါန်းသူကကူညီပံ့ပိုးရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကတိအားလုံးကို Gaur Purnima ၂၀၃၃ တွင်အပြည့်အ ၀ ပေးရမည်။
GURU PARAMPARA ခြေလှမ်းများ
Guru Parampara အဆင့် (၅၈) ခုသာရှိသည် (တစ်လှည့်လျှင်အလှူရှင် ၁၀ ဦး) - don ၅၁,၀၀၀ / ၁TP2T1,000
SRI PANCA-TATTVA ခြေလှမ်းများ
Sri Panca-Tattva အဆင့် ၄၀ သာရနိုင်သည် (တစ်လှည့်စီအတွက်အလှူရှင် ၁၀ ဦး) - akh1 သိန်း / $1,600
SRI SRI RADHA MADHAVA ခြေလှမ်းများ
Sri Sri Radha Madhava အဆင့် (၁၀) ခုသာလျှင်ရရှိနိုင်သည် - တစ်လှူဒါန်းသူ ၁၀ ဦး လျှင်₹ ၁.၅ သိန်း / ၁TP2T2,500
စပွန်ဆာတစ် ဦး PUJARI ကြမ်းပြင်အခန်း
Deities 'Pujari ကြမ်းပြင်တွင်ကမကထပြုရန် ၀ တ်ပြုခန်း ၂၁ ခန်းသာရှိသည်။ မြင့်မြတ်သော Sridhama Mayapur ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ဌာနချုပ်တွင် ISKCON ၏အဓိကနတ်ဘုရားများသို့တိုက်ရိုက်အမှုဆောင်ရန်တစ်ချိန်ကတစ်သက်တာအခွင့်အရေး။ သီရိသီရိရဒ်မဒဟာဗာ၊ သီရိပန်ချာတာတဗာနှင့်သီရိ Nrsimhadeva တို့ကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်အပျက်များကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ သူတို့၏ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအိမ်သစ်တွင်အခန်းတစ်ခန်းပြီးဆုံးခြင်းအားငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်သင်၏အမည်ကိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ ။ ယနေ့သင်၏ကတိသစ္စာကိုပြုပြီးသူတို့၏သခင်တို့၏ထာဝရကောင်းချီးများကိုခံယူပါ။
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင် ISKCON ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနတ်ဘုရားများကို ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သောနတ်ဘုရားများ၏ Pujari ကြမ်းပြင်၏ Grand Opening နှင့် TOVP တည်ဆောက်ခြင်းတွင်နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုရရှိလိမ့်မည်။ ဒီကြမ်းပြင်မှာအခန်းပေါင်း ၂၁ ခန်းကိုစီစဉ်ထားပြီးသူတို့ရဲ့ Graces Jananivas နှင့် Pankajanghri prabhus တို့၏လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာထားတယ်။ တစ်ခုချင်းစီသည်သူတို့၏ Lordships ၏ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်အထူးသီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။
1 Radharani Pakshala | အရွယ်အစား - 671 စတုရန်းပေ, 25 သိန်း / $35,000
2 Utsava Pakshala | အရွယ်အစား - 831 စတုရန်းပေ, 35 သိန်း / $51,000
3 Madhuram Pakshala | အရွယ်အစား - ၃၇၅ စတုရန်းပေ၊ ၁၅ သိန်း / ၁TP2T21,000
4 Bhoga Bandar | အရွယ်အစား - ၁၄၇ စတုရန်းပေ၊ ၉ သိန်းကျော်၊
၅ Radha Madhava Sringara Nilayam | အရွယ်အစား - 1291 စတုရန်းပေ, 31 သိန်း / $45,000
6 Pancha Tattva Sringara Nilayam | အရွယ်အစား - 1291 စတုရန်းပေ, 31 သိန်း / $45,000
7 Nrsimhadeva Sringara Nilayam | အရွယ်အစား - 113 sqft, 11 သိန်း / $15,000
8 Guru parampara Sringara Nilayam | အရွယ်အစား - ၈၂၀ စတုရန်းပေ၊ ၇ သိန်းကျော်၊
၉ Radha Madhava Bhushana Nilayam | အရွယ်အစား - 322 စတုရန်းပေ, 11 သိန်း / $15,000
10 Pancha Tattva Bhushana Nilayam | အရွယ်အစား - 322 စတုရန်းပေ, 11 သိန်း / $15,000
11 Nrsimhadeva Bhushana Nilayam | အရွယ်အစား - 204 စတုရန်းပေ, 11 သိန်း / $15,000
12 Radha Madhava Vastra Nirman Karyalaya | အရွယ်အစား - 1291 စတုရန်းပေ, 31 သိန်း / $45,000
13 Pancha Tattva Vastra Nirman Karyalaya | အရွယ်အစား - 1291 စတုရန်းပေ, 31 သိန်း / $45,000
14 Nrsimhadeva Vastra Nirman Karyalaya | အရွယ်အစား - 1091 စတုရန်းပေ, 31 သိန်း / $45,000
15 Mukhya Pujari Nilayam | အရွယ်အစား - 600 စတုရန်းပေ, 25 သိန်း / $35,000
16 Pujari Nilayam | အရွယ်အစား - 710 စတုရန်းပေ။ 11 သိန်း / $15,000
အထူး Seva အခန်းများ
17 Nityananda Upakarana Nilayam | အရွယ်အစား - ၆၂၄ စတုရန်းပေ၊ ၁၅ သိန်း / ၁TP2T21,000
18 Vrndadevi Nilayam | အရွယ်အစား - 1290 စတုရန်းပေ, 21 သိန်း / $31,000
19 Keshava Nilayam | အရွယ်အစား - 645 စတုရန်းပေ, 11 သိန်း / $15,000
20 Ananda Utsava Nilayam | အရွယ်အစား - 7086 စတုရန်းပေ, 21 သိန်း / $31,0000
21 Abhiseka niyojana-sala | အရွယ်အစား - ၈၂၀ စတုရန်းပေ၊ ၇ သိန်းကျော်၊
ဒီ seva အခွင့်အလမ်းအတွက်စပွန်ဆာပေးခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်းများကိုအွန်လိုင်းမှာလုပ်လို့မရပါ။ စပွန်ဆာပေးမှုများအားလုံးကို ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် Pujari ကြမ်းပြင်ကြီးမဖွင့်မီ Braja Vilasa das နှင့်အတည်ပြုရမည်ဖြစ်ပြီးဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်သုံးနှစ်အထိအရစ်ကျပေးရမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ လှူဒါန်းမှုအသေးစိတ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် Braja Vilasa ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကျေးဇူးတင်လွှာ (ဒင်္ဂါးပြား ၆ ခု)
TOVP ရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများစွာပေးနိုင်သောသူများအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤအလှူရှင်များအားအကြွေစေ့ ၆ မျိုးရွေးချယ်ထားသည်။
Srivas ဒင်္ဂါးပြား - $11,000
Gadadhara ဒင်္ဂါးပြား - $25,000
Advaita ဒင်္ဂါးပြား - $51,000
Nityananda ဒင်္ဂါးပြား - $108,000
Caitanya အကြွေစေ့ - $250,000
Radharani ဒင်္ဂါးပြား - $1,000,000
ဂဏန်းခြောက်ခုတွင်သင့်အားလက်ဆောင်အဖြစ်ခိုင်မာသောသတ္တုအထိမ်းအမှတ်ဒင်္ဂါးများ၊ Radha Madhava, Mahaprabhu နှင့် Nrsimhadev Tile တို့ပါဝင်သည်။ သင့်နာမည်အားသက်ဆိုင်ရာယဇ်ပလ္လင်များအောက်၌ထားရန်သင့်နာမည်နှင့် TOVP Devotional Wall of of ကျော်ကြားမှု
သင်၏ပေါင်ထားသောငွေပေးချေမှုများပြီးပါကသင်၏အုတ်နှင့်ကြွေပြားပေါ်တွင်သင်လိုချင်သောအမည်များကိုတောင်းခံရန် TOVP ရုံးမှကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
TOVP သံအမတ်ဖြစ်လာပြီးသင်၏ ၀ တ်ပြုသူမိသားစုများနှင့်သူငယ်ချင်းများအား ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် TOVP ကိုပြီးမြောက်ရန် MISSION 23 Marathon တွင်ပါဝင်ရန်ပြောပါ။
TOVP ရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည်သင်ကိုယ်တိုင်ဆည်းကပ်မြှုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးယခုဗိမာန်တော်အတွင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သောစကျင်ကျောက်ဖုံးအုပ်ထားသောသဲကျောက်တိုင် ၁၀၈ ခုကိုပြီးမြောက်စေရန်ကူညီခြင်းအားဖြင့်တိုင်ကြားမှု၏မဏ္ဏန်လှုပ်ရှားမှုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
မဏ္ိုင်မှစပွန်ဆာပေးမှုသည်ပထမ ဦး ဆုံးလာသည်၊ ပထမဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းခံရပြီးကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။
Sravanam တိုင် (၁၀ ခုတည်းသာ) - ၁TP2T ၂၁၀၀၀ / ၁၅ သိန်း
Kirtanam တိုင် (၃၂ ခုသာ) - $31,000 / 21 သိန်း
Smaranam တိုင် (၃၄ ခုသာ) - $51,000 / 35 သိန်း
Atma Nivedanam တိုင် (၃၂ ခုသာ) - ၁TP2T108,000 / 71 သိန်း
ဤစပွန်ဆာပေးမှုတွင်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်တည်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး generations ည့်သည်များနှင့်ကိုးကွယ်သူများကိုနောင်လာမည့်မျိုးဆက်များအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများမြင်တွေ့ရမည့်မှတ်တိုင်ပေါ်တွင်အမြဲတမ်းရေးထိုးထားသည့်သင်၏အမည်ပါ ၀ င်သည်။ သင်၏နာမည်ကိုလည်း TOVP Devotional of Fame တွင်လည်းထည့်ပါလိမ့်မည်။
ငွေပေးချေမှုအားလုံးကို ၂၀၃၃ ခုနှစ်၌ Grand Opening ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်သည်။
စပွန်ဆာတစ် ဦး က RADHA-MADHAVA အုတ်
$2,500 / ₹ ၁.၅ LAKH
ကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဘုရားများ ၁၀၀၈ Radha-Madhava အုတ်များနှင့်သူတို့၏ Lordships ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင်ထည့်ရန်စပွန်ဆာများ၏အမည်များဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ Radha Madhava အုတ်ကိုကမကထပြုခြင်းဖြင့်သမိုင်း၏သမိုင်းဝင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါမည်။ သင်၏အမည်သည်သူတို့၏ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ရှိနေလိမ့်မည်။
Srila Prabhupada ၏အနိမ့်ဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်သော TOVP ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်သင်၏ကြီးမားသောကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ TOVP သံအမတ်ဖြစ်လာပြီးသင်၏ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို TOVP MISSION 23 မာရသွန်ကိုပါထောက်ခံပါ။
စပွန်ဆာတစ် ဦး က MAHAPRABHU အုတ်
$1,600 / ₹ ၁ LAKH
ကျွန်ုပ်တို့သည် Panca Tattva နတ်ဘုရားများ ၁၀၀၈ Mahaprabhu အုတ်များကိုသူတို့၏ Lordships ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင်တင်ရန်ပံ့ပိုးသူများ၏အမည်များဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ Mahaprabhu အုတ်ကိုကမကထပြုခြင်းဖြင့်သမိုင်း၏သမိုင်းဝင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးသင်၏နာမသည်သူတို့၏ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ တည်ရှိနေလိမ့်မည်။
GURU PARAMPARA အုတ်
စပွန်ဆာတစ် ဦး က GURU PARAMPARA အုတ်
ဤသည်အလွန်အထူးလှူဒါန်းမှု option ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင် Acharyas မသာပေမယ့် ISKCON ၏ဂုရုအားလုံးကိုအပ်နှံသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဂုရုကိုယ်စား၎င်းနှင့်သူ၏နာမ၌အုတ်ကိုကမကထပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသော်လည်း၊ သင်၏နာမည်ကိုလည်း Guru Parampara ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင်ထားရန်၎င်းအောက်တွင်ရေးထားသည်။ Guru Parampara ယဇ်ပလ္လင်သည်ငါတို့၏ယခင် Acharyas များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်းသင်၏ဂုရု၏နာမနှင့်အုတ်ကိုကမကထပြုခြင်းသည်သင်၏ဂုရုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါရီဆက်ဆာရာ၏ purva acharyas နှစ်ခုလုံးအားတစ်ပြိုင်တည်းဂုဏ်ပြုရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီ seva အခွင့်အလမ်းများအတွက်အုတ် 1008 ရရှိနိုင်ပါသည်။
စပွန်ဆာတစ် ဦး က NRSIMHADEVA အုတ်
Lord and Nrsimha ၁၀၀၈ Nrsimhadeva အုတ်များကိုသူနှင့်သူ၏ Prahlad Maharaja ၏ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင်ထားရန်စပွန်ဆာများ၏အမည်များဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ Nrsimhadeva အုတ်ကိုကမကထပြုခြင်းဖြင့်ယနေ့သမိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးသင်၏နာမသည်သူတို့၏ယဇ်ပလ္လင်အောက်တွင်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ရှိနေလိမ့်မည်။
Srila Prabhupada ၏အချစ်ဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်သော TOVP ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်သင်၏ကြီးမားသောကိုယ်ကျိုးစွန့်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ TOVP သံအမတ်ဖြစ်လာပြီးသင်၏ဆွေမျိုးများ၊ မိတ်ဆွေများအားလုံးကို TOVP MISSION 23 မာရသွန်ကိုပါထောက်ခံပါ။
တစ် ဦး ကနေ့အဘို့နေ့တိုင်းအောင်ပွဲအလွှာကမကထ
$701 / ₹ 51,000 - Radha Madhava, Pancha Tattva နှင့် Guru-parampara Dome အတွက်
$501 / ₹ 35,000 - Planetarium သို့မဟုတ် Nrsimhadeva Domes များအတွက်
ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းအသစ်ဖြစ်သော RaiseaDaily Victory အလံသည် TOVP Victory အလံအသစ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ အနာဂတ်ကာလအထိ ISKCON အားဆက်ကပ်အပ်နှံသူများသည် TOVP တည်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးစောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
TOVP domes သုံးခုစလုံးတွင်နေ့စဉ်အလံအသစ်တစ်ခုကိုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုစီသည်သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုစီကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Nrsimhadeva's flag သည် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, Radha Madhava နှင့် Pancha Tattva အလံကိုကိုယ်စားပြုတယ် သစ္စာ နှင့် Planetarium အလံကိုကိုယ်စားပြုတယ် ပညာရေး.
နေ့စဉ်အလံတစ်ခု၊ နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုသင်ဆန္ဒရှိသလောက်ကမကထပြုနိုင်သည်။ ဤသည် seva အထူးသဖြင့်မင်္ဂလာရှိသောနှင့် 2023 ခုနှစ်တွင် Grand Opening အထိ $2 သန်းအထိမြှင့်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် MISSION 23 မာရသွန်စဉ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ပုံငွေရှာအားထုတ်မှုနှင့်အတူအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့၊ မင်းရဲ့ဂုရုရဲ့သွင်ပြင်၊ နေ့၊ Acharya ၏အသွင်အပြင်ကဲ့သို့မင်္ဂလာရှိသောနေ့၌သင်၏နာမည်၊ မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ၏နာမည်အားအလံတစ်ခုကိုကမကထပြုနိုင်သည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ပါကသင့်နေထိုင်ရာကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့သို့သင်၏နာမ၌ပေါ်ပေါက်စေသည့်အလံတော်ကိုအထူးလက်ဆောင်အဖြစ်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးပါမည်။.
သင်၏ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ချိန်တွင်ဤစပွန်ဆာကိုအပြည့်အဝပေးရမည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ နှင့်အချို့သောအရေးကြီးသောနေ့ရက်ကာလများကဲ့သို့ Janmastami, Gaur Purnima, Nrsimha Caturdasi, etc စပွန်ဆာအခကြေးငွေပိုလိမ့်မည်။
TOVP သံအမတ်ဖြစ်လာခြင်းအားဖြင့် TOVP ကိုကူညီပါ။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် TOVP ပြီးမြောက်ရန် TOVP MISSION 23 Marathon ကိုကူညီရန်သင်၏ကိုးကွယ်သောမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုပြောပြပါ။
စတုရန်းပေ OR မီတာကိုကမကထပြုပါ
ကြီးမားသောလှူဒါန်းရန်ငွေရေးကြေးရေးနည်းလမ်းများမရှိသော်လည်း TOVP တည်ဆောက်ရန်သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူများအတွက်သင်တစ်စတုရန်းပေသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ လှူဒါန်းနိုင်ပြီး Srila Prabhupada အတွက်သင်၏အစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ဝမ်းသာနိုင်သည်။ TOVP သည်စတုရန်းပေ ၃၀၀,၀၀၀ ဖြစ်ပြီးသင်ပံ့ပိုးပေးသောစတုရန်းပေသို့မဟုတ်မီတာတိုင်းသည် TOVP ပြီးမြောက်ရန်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းစေသည်။
သငျသညျစပွန်ဆာ၏ပထမ ဦး ဆုံးစတုရန်းပေ6ရွေးချယ်ရေး၏အချိန်မှာအပြည့်အဝပေးဆောင်ရပါမည်။ ထိုနောက်သင်အရစ်ကျရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပြီးငွေပေးချေမှုအတွက်ငွေပမာဏနှင့်အချိန်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၌စွမ်းရည်ရှိပါက MISSION 23 Marathon ၏အရေးတကြီးသဘောထားနှင့်အရေးကြီးမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအပြည့်အဝပေးဆောင်ပါ။ သင်၏ဂုရု (သို့) မိသားစု ၀ င်တစ်ယောက်၏ကိုယ်စား Square Foot တစ်ခုကိုစပွန်ဆာပေးခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားပါ။ သငျသညျအထိ 50 စတုရန်းပေအထိစပွန်ဆာနိုင်ပါတယ်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများနှင့်လူငယ်များကိုပင်ဤအံ့ဖွယ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲရန်နှင့်ဝိညာဉ်ရေးအရအကျိုးအမြတ်ရရှိရန်မြှုပ်နှံခြင်းအတွက်ပင်အခွင့်အရေးပေးပါသည်။ TOVP ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် Lord Caitanya ၏ကရုဏာတော်ကိုကမ္ဘာသို့ယူဆောင်လာရန်မည်သူမဆို Srila Prabhupada ကိုနှစ်သက်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့၏အစွမ်းကိုပေးလိုစိတ်ပြင်းပြသောကျိုးနွံသောငွေရေးကြေးရေးနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသူများသည်ယင်းသည်သူတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကိုကိုးကွယ်သူတိုင်းလက်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီးမည်သူ့ကိုမျှမစွန့်ခွာချင်ပါ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် Grand Opening မတိုင်မီတစ်ကြိမ်သာလှူဒါန်းခြင်းသို့မဟုတ် $10 သို့မဟုတ် $20 တစ်ကြိမ်လစဉ်ထပ်ခါတလဲလဲလှူဒါန်းခြင်းကိုပင်သင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုငွေပေးချေခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
TOVP သံအမတ်ဖြစ်လာပြီးသင်၏ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်သူမိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် TOVP ပြီးမြောက်ရန် TOVP MISSION 23 မာရသွန်တွင်ပါဝင်ရန်ပြောပါ။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏ပေါင်ထားသောငွေပေးချေမှုကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူ။ ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ကောင်းရွေးစရာများကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ အထက်ပါအကြောင်းပြချက်နှင့်သင်၏ပေါင်ထားသောငွေကိုအမြန်ဆုံးပေးဆပ်မည့်ငွေပမာဏအတွက်အလိုအလျောက်ထပ်ခါတလဲလဲငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သောရန်ပုံငွေများရှိပါသည်။ သင်၏တည်မြဲသောထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင်ရွေးချယ်လိုက်သည့်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲပမာဏကိုလှူဒါန်းရန်ညာဘက်ရှိခလုတ်ကိုသာအသုံးပြုပါ။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် Grand Opening မတိုင်မီတစ်လလျှင် $10 သို့မဟုတ် $20 လှူဒါန်းရန်စဉ်းစားပါ။
အထွေထွေလှူဒါန်းမှုအတွက်မည်သည့်ငွေပမာဏနှင့်မည်သည့်စည်းကမ်းချက်များကို (တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲ) ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်၏လုပ်ငန်းများကို TOVP သို့လှူဒါန်းပါ
စတော့ရှယ်ယာအစီအစဉ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို TOVP သို့အချို့သောအစုရှယ်ယာများလှူဒါန်းခြင်းအတွက်လှူဒါန်းခြင်းတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သို့မဟုတ် MISSION 23 MARATHON အပေါ်ထားရှိသောကတိက ၀ တ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ TOVP သည်ဤကဲ့သို့သောလှူဒါန်းမှုများကိုလက်ခံရန်အတွက်ယခုဖွဲ့စည်းထားသည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် International Fundraising Director, Braja Vilasa သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ brajavilasa.rns@gmail.com သို့မဟုတ်မှာသူ့ကိုခေါ်ခြင်းဖြင့် +91 95359 90391.
လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ ဘာသာရေးနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားနောက်ဆုံး ၀ ိညာဉ်နှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလှူဒါန်းခြင်းသည်ဘုံနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောလုပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဥစ္စာဓနရှိသူများသည်၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖြန့်ဝေသောအခါသူတို့၏အတွေးတွင် TOVP ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဖတ်ရန်ကိုနှိပ်ပါ တိုတိုနှင့်ရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက် သင်၏နောက်ဆုံးအလိုတော်တွင်သင်ထည့်ဝင်သောအမျိုးမျိုးသောလှူဒါန်းမှုအမျိုးအစား ၃ ခု - Fixed Sum, တိကျသောအမွေနှင့် Residuary Legacy ။
US ရှိနိုင်ငံတကာနှင့်အမျိုးသားကုမ္ပဏီတော်တော်များများသည် TOVP ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ ၀ န်ထမ်းများလှူဒါန်းခြင်းကို Benevity, Cybergrants နှင့်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးများမှတဆင့်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်။ သော်လည်းကောင်းကိုက်ညီနေသည်။ TOVP သို့သင်၏လှူဒါန်းမှုကိုနှစ်ဆတိုးမြှင့်လိုပါက TOVP ဖောင်ဒေးရှင်းမှသင့်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်လိုပါက Nandini Kishori devi dasi သို့ဆက်သွယ်ပါ။ nandini.kishori@gmail.com။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးတွင်သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်ထည့်ပါ။
`ကိုးကွယ်ဆည်းသူသည်သခင်အားတစ်စုံတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းပါကသူသည်မိမိအကျိုးအတွက်လုပ်ဆောင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိုးကွယ်သူတစ် ဦး သည်သခင်ဘုရားအားကမ်းလှမ်းသည့်အရာသည်ကမ်းလှမ်းမှုများထက်အဆသန်းပေါင်းများစွာပိုများလာသည်။ လူတစ် ဦး သည်သခင်အားပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းမဟုတ်ပါ; လူတစ် ဦး သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအမြတ်ရရှိသူဖြစ်လာသည်။ ”
အသစ် လှူဒါန်းခြင်း hotlines
သင်လှူဒါန်းရန်အခက်တွေ့နေပါကသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှလှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ရန်မတတ်နိုင်ပါကအကူအညီအချို့လိုအပ်ပါကသို့မဟုတ်သင့်လှူဒါန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအချို့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုရှိသူအားကျွမ်းကျင်သူများကရပ်တည်နေသည်။ သင့်အားလှူဒါန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ပေးရန်နှင့်အဖြေပေးရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ မေးခွန်းများရှိပါသလား။ သင်တို့သည်လည်းငါတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ် fundraising@tovp.org။ သတိရပါ၊ သင်သည်သင်၏လှူဒါန်းမှုသမိုင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင်၏ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုအချိန်မှီကူးယူနိုင်သည် အလှူရှင်စာရင်း စာမျက်နှာတိုင်း၏ညာဘက်ထောင့်ရှိ Tab ။
ဘာသာစကားများ - အင်္ဂလိပ်၊
ဘာသာစကားများ - အင်္ဂလိပ် & ဟိန္ဒူ
HALADHAR RAM ကို DAS
ဘာသာစကားများ - ဘင်္ဂလီ & ဟိန္ဒူ
ဘာသာစကားများ - အင်္ဂလိပ်၊ ဟိန္ဒူနှင့်မာရသီ
ဘာသာစကားများ - အင်္ဂလိပ်
အချိန်ဇုန် - အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းစံချိန်
တည်နေရာ / အချိန်ဇုန် - ကနေဒါ
တည်နေရာ / အချိန်ဇုန်: ယူကေနှင့်ဥရောပ
ဘာသာစကားများ - ယူကရိန်း / ရုရှ
တည်နေရာ / အချိန်ဇုန်: ယူကရိန်း
ဘာသာစကားများ - ရုရှား
တည်နေရာ / အချိန်ဇုန် - ရုရှား
Lakh 70 သိန်း / $ 108,000
Lakh 31 သိန်း / $51,000
Lakh 15 သိန်း / $25,000
Lakh7သိန်း / $11,000
Lakh 15 သိန်း / $21,000
(ကန့်သတ်ထုတ်ဝေသည့်တိုင် ၁၀ ခုသာ)
Lakh 21 သိန်း / $ 31,000
(ကန့်သတ်ထုတ်ဝေသည့်တိုင် ၃၂ ခုသာ)
₹ 35 သိန်း / $ 51,000
(ကန့်သတ်ထုတ်ဝေထားသောတိုင် ၃၄ ခုသာ)
Lakh 71 သိန်း / $ 108,000
စပွန်ဆာတစ် ဦး ကရာဟာနီဒင်္ဂါးပြား
ကမကထတစ် ဦး ကဂဒတ်အကြွေစေ့
စပွန်ဆာတစ် ဦး က SRIVAS အကြွေစေ့
သင်၏ Residency ကိုရွေးချယ်ပါ